ထရိုင်ဂိုဒါးမား အေ⁠ကြာင်းသိ⁠ကောင်းစရာ (Trichoderma) - Myanmar Farmers' Portal
Home စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ထရိုင်ဂိုဒါးမား အေ⁠ကြာင်းသိ⁠ကောင်းစရာ (Trichoderma)
ထရိုင်ဂိုဒါးမား အေ⁠ကြာင်းသိ⁠ကောင်းစရာ (Trichoderma)
ထရိုင်ဂိုဒါးမားဆိုတာ ဘာလဲ ? (What is Trichoderma)
ထရိုဂိုဒါးမားဆိုသည်မှာ အဏုဇီဝမှိုတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ သီးနှံပင်အကြွင်းအကျန်များ၊ ကောက်ရိုး၊ မြက်ခြောက်၊ စပါးခွံ၊ ဗေဒါသစ်ရွက်ခြောက်များကို အဆွေးမြန်သဖြင့် မြေဆွေးပုံများပြုလုပ် ရာတွင် အီးအမ်ဖျော်ရည်ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ဒိုချက်ကင်တို့ ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ မြေဆွေးပုံများ (Compost) ပြုလုပ်သုံးစွဲရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
ကောက်ရိုးကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကို မြေဆွေးလုပ်ရာတွင် အီးအမ်ဖျော်ရည်ထက်ပင် ပို၍ ဆွေးမြေ့ မှုမြန်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သီးနှံပင်၏ မြေဆောင်ရောဂါအများအပြားကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ နှိမ်နင်းခြင်းများကြောင့် မှိုသတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးများ လူသိများပါသည်။
ဘယ်လိုပြုလုပ်သုံးစွဲရမလဲ (Making and used it)
၁ ။ မြေဆွေးပုံရာတွင် သစ်ပင်အကြွင်းအကျန်များအားလုံး၊ အမှိုက်သရိုက်အားလုံးကို မြေဆွေးပုံ ပြုလုပ်နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ မြေဆွေးလုပ်သည့်မှိုမျိုးသာ ကွာပါသည်။
၂ ။ မြေဆွေး (Compost) ပြုလုပ်သုံးစွဲရာတွင် အလျား ၁၀ ပေ၊ အနံ ၃ ပေ၊ အမြင့် ၃ ပေ အရွယ် ရှိမြေဆွေးပုံ တစ်ပုံလျှင် ထရိုင်ဂိုဒါးမားမှိုမျိုး နှစ်ထုပ်ကို ဖွဲနုနှစ်ပြည်နှင့် သမစွာရောမွှေ၍ အလွှာ လိုက်ထည့်ပေးပါ။ ထည့်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ဆွေးမြေ့စေပါသည်။
၃။ သီးနှံများရိတ်သိမ်းပြီး ကျန်ခဲ့သော ငုတ်တိုများ၊ စပါးရိုးပြတ်များ၊ အမြန်ဆွေးမြေ့စေ ရန်တစ် ဧကလျှင် မှိုမျိုးထုပ် သုံးထုပ် နှင့် ဖွဲနုလေးပြည် နှင့် သမစွာ ရောမွှေ၍ ညီညာစွာ အနှံကြဲပက် ဖြန်းပေးပြီး ထွန်ဖြင့် ဖုံးပေးပါ။ လျင်မြန်စွာ ဆွေးမြေ့ စေပါသည်။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်နှင့် နောက်ထပ်တစ်သီးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အထူးပြုလုပ်သုံးစွဲသင့်သည်။
၄။ မှိုမျိုးထုပ်များကို ရန်ကုန်မြေပဒေသာကျွန်း စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်နှင့် မြို့ နယ်အနှံ့ စိုက်ပျိုးရေး ဆေးအရောင်းဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ထူးခြားသည့် အကျိုးကျေးဇူးမှာ မြေဆွေးပြုလုပ်သုံးစွဲရုံမျှမက မြေဆောင်ရောဂါများ ကျရောက်ြ ခင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သဖြင့် ဇီဝမှိုသတ်ဆေးအဖြစ် ၀ယ်ယူအသုံးပြုကြ၏။
ထရိုဂိုဒါးမားမှိုမျိုးထုပ်သည် ဇီဝသက်ရှိဖြစ်၍ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးသူရော သီးနှံစားသုံးသူပါ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေပါသည်။
(က) ခါးရိရောဂါ (ရေ၀ပ်လျှင်ပိုအဖြစ်မြန်) Selerotium spp တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ခ) အပင်ညှိုးသေရောဂါများ (Fusarium wilt)
(ဂ) ပင်ရင်းပုတ်ရောဂါများ (Aspergills spp) ကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ဃ) မြစ်ခြောက်၊ မြေဆွေးရောဂါ (Phizoctonia spp) ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၅။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် မျိုးစေ့ နှင့်လူးနယ်ပြီး ချက်ချင်းစိုက်ပြီးလျှင် ပြီးချင်း မြေပြန်ဖုံးပေးပါ။
ထရိုငျဂိုဒါးမား အေ⁠ကွာငျးသိ⁠ကောငျးစရာ (Trichoderma)
ထရိုငျဂိုဒါးမားဆိုတာ ဘာလဲ ? (What is Trichoderma)
ထရိုဂိုဒါးမားဆိုသညျမှာ အဏုဇီဝမှိုတဈမြိုးဖွဈပါသညျ။ သီးနှံပငျအကွှငျးအကနျြမြား၊ ကောကျရိုး၊ မွကျခွောကျ၊ စပါးခှံ၊ ဗဒေါသဈရှကျခွောကျမြားကို အဆှေးမွနျသဖွငျ့ မွဆှေေးပုံမြားပွုလုပျ ရာတှငျ အီးအမျဖြျောရညျကဲ့သို့လညျးကောငျး၊ ဒိုခကျြကငျတို့ ကဲ့သို့လညျးကောငျး၊ မွဆှေေးပုံမြား (Compost) ပွုလုပျသုံးစှဲရာတှငျ အလှနျအသုံးဝငျပါသညျ။
ကောကျရိုးကဲ့သို့သောပစ်စညျးမြားကို မွဆှေေးလုပျရာတှငျ အီးအမျဖြျောရညျထကျပငျ ပို၍ ဆှေးမွမှေု့မွနျကွောငျး သိရှိရပါသညျ။ သီးနှံပငျ၏ မွဆေောငျရောဂါအမြားအပွားကို ကာကှယျပေးခွငျး၊ နှိမျနငျးခွငျးမြားကွောငျ့ မှိုသတျဆေးအဖွဈလညျး အသုံးမြား လူသိမြားပါသညျ။
ဘယျလိုပွုလုပျသုံးစှဲရမလဲ (Making and used it)
၁ ။ မွဆှေေးပုံရာတှငျ သဈပငျအကွှငျးအကနျြမြားအားလုံး၊ အမှိုကျသရိုကျအားလုံးကို မွဆှေေးပုံ ပွုလုပျနညျးအတိုငျး ပွုလုပျပေးရနျဖွဈသညျ။ မွဆှေေးလုပျသညျ့မှိုမြိုးသာ ကှာပါသညျ။
၂ ။ မွဆှေေး (Compost) ပွုလုပျသုံးစှဲရာတှငျ အလြား ၁၀ ပေ၊ အနံ ၃ ပေ၊ အမွငျ့ ၃ ပေ အရှယျ ရှိမွဆှေေးပုံ တဈပုံလြှငျ ထရိုငျဂိုဒါးမားမှိုမြိုး နှဈထုပျကို ဖှဲနုနှဈပွညျနှငျ့ သမစှာရောမှေ၍ အလှာ လိုကျထညျ့ပေးပါ။ ထညျ့ပွီး နှဈပတျအတှငျး ဆှေးမွစေ့ပေါသညျ။
၃။ သီးနှံမြားရိတျသိမျးပွီး ကနျြခဲ့သော ငုတျတိုမြား၊ စပါးရိုးပွတျမြား၊ အမွနျဆှေးမွစေ့ေ ရနျတဈ ဧကလြှငျ မှိုမြိုးထုပျ သုံးထုပျ နှငျ့ ဖှဲနုလေးပွညျ နှငျ့ သမစှာ ရောမှေ၍ ညီညာစှာ အနှံကွဲပကျ ဖွနျးပေးပွီး ထှနျဖွငျ့ ဖုံးပေးပါ။ လငျြမွနျစှာ ဆှေးမွစေ့ပေါသညျ။ နှစေပါးစိုကျပြိုးရနျနှငျ့ နောကျထပျတဈသီးစိုကျပြိုးရနျအတှကျ အထူးပွုလုပျသုံးစှဲသငျ့သညျ။
၄။ မှိုမြိုးထုပျမြားကို ရနျကုနျမွပေဒသောကြှနျး စိုကျပြိုးရေးဆိုငျနှငျ့ မွို့နယျအနှံ့ စိုကျပြိုးရေး ဆေးအရောငျးဆိုငျမြားတှငျ ဝယျယူရရှိနိုငျပါသညျ။
ထူးခွားသညျ့ အကြိုးကြေးဇူးမှာ မွဆှေေးပွုလုပျသုံးစှဲရုံမြှမက မွဆေောငျရောဂါမြား ကရြောကျွ ခငျးမှ ကာကှယျပေးနိုငျသဖွငျ့ ဇီဝမှိုသတျဆေးအဖွဈ ဝယျယူအသုံးပွုကွ၏။
ထရိုဂိုဒါးမားမှိုမြိုးထုပျသညျ ဇီဝသကျရှိဖွဈ၍ ပတျဝနျးကငျြ နှငျ့ သဟဇာတဖွဈ၍ စိုကျပြိုးသူရော သီးနှံစားသုံးသူပါ ဘေးအန်တရာယျ ကငျးဝေးစပေါသညျ။
(က) ခါးရိရောဂါ (ရဝေပျလြှငျပိုအဖွဈမွနျ) Selerotium spp တို့ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
(ခ) အပငျညှိုးသရေောဂါမြား (Fusarium wilt)
(ဂ) ပငျရငျးပုတျရောဂါမြား (Aspergills spp) ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
(ဃ) မွဈခွောကျ၊ မွဆှေေးရောဂါ (Phizoctonia spp) ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၅။ ကွိုတငျကာကှယျရနျအတှကျ မြိုးစေ့ နှငျ့လူးနယျပွီး ခကျြခငျြးစိုကျပွီးလြှငျ ပွီးခငျြး မွပွေနျဖုံးပေးပါ။